Ungayikhulisa Kanjani iTurmeric Emibhedeni Noma Iziqukathi - Amakhambi
Ungayikhulisa Kanjani iTurmeric Emibhedeni Noma Iziqukathi
Konke okuphathelene ne-turmeric‌
Lapho kutshalwa yini?
Ukushisa kwelanga kanye ne-Sun
Ukuvuna kanye nokugcina
Ukukhula kwe-turmeric kufana nokudlalayo usebenzisa i-cooker ehamba kancane ekhishini. Uhlobo lokuhlangenwe nakho 'ukusethe bese ukulikhohlwa'. Iningi lendlela yokutshala i-turmeric lizoba lula ngezimo noma izithako ezikhulayo ezifanele. I-Turmeric idinga inhlabathi evundile, ekhishwe kahle endaweni enelanga eliningi namanzi amaningi. Kudinga ukuhlolwa ngezikhathi ezithile ukuqinisekisa ukuthi inhlabathi imanzi, hhayi i-soggy, kanye nomanyolo ngezikhathi ezithile njengoba ungabeka izinongo kumpheki wakho ophuthumayo. Ngemuva kokulinda ngokubekezela, izinyanga emva kokutshala uzovuna imivuzo yakho. Ungavumeli inkathi ende ekhulayo yezinyanga eziyi-10 ikwesabise, kube sengathi isimo sezulu sakho silungile sidinga ukunakekelwa okuncane kakhulu.
I-Turmeric ingasetshenziswa entsha, eyomisiwe, noma eyimpuphu njengokwengeza upelepele ezitsheni ezahlukahlukene futhi iyathandwa ekuphekeni kwaseNdiya. Umbala wayo ophuzi ophuzi / osawolintshi unikeza umbala ofanayo ekudleni okuphekwe ngokunikeza elinye igama laso lesafroni laseNdiya. Ifunwa kakhulu ngezindawo zayo zokwelapha.
I-retinol ithatha isikhathi esingakanani ukusebenza
Ngenxa yokuthi i-turmeric ikhulile kusuka empandeni ye-rhizome noma e-tuberous, kulula ukusindisa nokuvuna inkathi yemiklomelo emva kwesizini. Gcina okumbalwa ngokutshala kwakho okulandelayo! Ungaqala ngama-rhizomes avela esitolo noma utshale imali ethile kusuka ezindlini zembewu ngeminikelo engajwayelekile noma uthole ngisho nokuqala kwesitshalo kusuka ezikhungweni zezitshalo ezikhethekile ezitshalweni ezishisayo.
Imikhiqizo Emihle Ye-Turmeric Ekhulayo:
Isinambuzane Esiphephile Sokubulala Insipho
Inambuzane yePyGanic Botanical
Ama-NaturesGoods aZuzisa ama-Nematode
Uma ufunda indlela yokutshala i-turmeric, ungagcina ukunikezwa kwe-neverending.
Amagama ajwayelekile I-turmeric, ujinja ophuzi, isafron yaseNdiya
Igama Lesayensi ‌ Curcuma longa
Izinsuku zokuvunwa kwezinsuku ‌275-300
Ukukhanya Ilanga eligcwele, umthunzi oyingxenye lapho ungaphezulu kwama-degree angama-90
Amanzi Amanzi we-ample, gwema izimo ezi-soggy
Inhlabathi Ukukhipha kahle, okunothile ngezakhi
Umanyolo Okuphakelayo okunzima; sebenzisa umanyolo ovamile olinganiselayo
Izinambuzane Ama-aphid, izibungu zesicabucabu
Izifo Ukubola kwezimpande ze-fungal, i-root-knot nematodes
Isiphepho (Curcuma longa) isitshalo esishisayo esisebenzisa izinto eziningi zokupheka kanye nodayi. Kuyimpande noma i-rhizome efunwa kakhulu. Ama-rhizomes akhanyayo aphuzi noma awolintshi angasetshenziswa amasha noma omisiwe futhi anezinto eziningana zokwelapha njenge-anti-inflammatory futhi anconyelwe labo abane-arthritis noma okunye ukuvuvukala. I-Turmeric ine-flavour ejulile, yomhlaba enomunwe omncane we-peppery nomunyu.
Uma upheka nge-turmeric, lindela ukuthi wonke amathuluzi akho namapani abe nebala lesikhashana eliphuzi-olintshi. Yile ndawo yedayi ye-turmeric eyahamba isuka ezwekazini layo laseNdiya kulo lonke elaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia ngokusabalala kobuHindu nobuBuddha. Idayi ephuzi isetshenziselwa ukupenda izingubo zezindela nabapristi. I-Turmeric ikhiqiza umbala ofudumele wegolide kuzindwangu zikakotini zemvelo ezingadayiwe, usilika noboya. I-powder e-turmeric ingangeza i-hue yegolide kuma-curries, ilayisi, nobisi kanye nokudla kwemvelo kwamaqanda e-Easter noma amakhekhe.
Ngakho-ke njenge-ginger okuthi empeleni kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi i-ginger ephuzi, i-turmeric isemndenini ofanayo wezitshalo, iZingiberaceae, futhi inezimo ezikhulayo ezifanayo kumzala wayo we-zingy. Ngaphezu kwezimpande zokupheka, kuyisitshalo esihle ongaba naso engadini yakho. Amaqabunga amakhulu acwebezelayo engeza ukuzwa okushisayo futhi izimbali zihle. Uma izimo zakho zipholile kunezimo zomdabu eNdiya naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, kungenzeka ingakuveleli. Kepha uma kwenzeka, ukulo mbukiso. Izimbali ngokuvamile zimhlophe ezinye zinamathiphu ansomi noma apinki futhi ziyadliwa! Izimbali zezimbali nama-bracts aluhlaza aluhlaza anephunga elinamandla kepha ukunambitheka okuncane kwe-turmeric.
Imigqa yezitshalo ezincane ze-turmeric ezikhulayo.
I-Turmeric inesikhathi eside sezinyanga eziyi-9-10. Ngenhlanhla, ayidingi ukunakekelwa okuningi ngaleso sikhathi inqobo nje uma uyisethela impumelelo.
Bala uhlehle emuva ezinyangeni eziyishumi kusukela ngosuku lweqhwa lakho lokuqala. Ezimweni eziningi zezulu, lokho kuzodinga ukutshala endlini ngoJanuwari noma ngoFebhuwari. Uma uhlala ngenkathi enesimo sezulu esibi ungaqala ngqo ngaphandle ngoMashi. Izimo ezipholile zenhlabathi zizoholela ekuqaleni okuhamba kancane. Ufuna ukuthi isikhathi sibe neningi lokukhula kwalo ekushiseni kwehlobo bese ufaka i-dormancy ngasekupheleni kokuwa. Lapho ingena ekulaleni ilungele ukuvunwa.
Uma uhlala esimweni sezulu esinezimo ezifudumele phakathi nenkathi ende ungatshala i-turmeric yakho embhedeni ophakanyisiwe noma ophansi. Uma inhlabathi ipholile kakhulu ama-rhizomes azophuza ukuhluma. Izitshalo ezintsha ze-turmeric zingakhula zifike ku-3 ’ubude ngakho-ke qiniseka ukuthi unendawo eningi futhi ngeke uvale izitshalo ezingomakhelwane ngokungadingekile.
Uma uhlala esimweni sezulu esibi, hlala nezinguquko esimweni sezulu esikhulayo. Tshala i-turmeric ebhodweni elingahanjiswa endlini lapho kudingeka. Kungakhathalekile ukuthi iyiphi indawo, ukutshala ezimbizeni kuvumela izitshalo ze-turmeric ukuthi zihanjiswe ukuze zinikeze ukushisa nokukhanya kwelanga okuningi kepha zivumela umthunzi noma ukuhlinzeka ngelanga elicwengekileyo uma amazinga okushisa eseqile.
Khetha ama-rhizomes aqinile aqukethe ama-bumps amaningi noma izindawo zokuhluma eceleni. I-rhizome enkulu uma ushesha uzobona amahlumela. Ungalingeki ukusika izingxenye ezincane njengoba kungenzeka ngamazambane. Tshala i-turmeric enamaqhubu ayi-3-4 lilinye. Uma usika ama-rhizomes akho abe yizicucu ezincane, welaphe okungenani isonto ukuze ukusika komile futhi kuqhume ngaphezulu, ngaleyo ndlela unciphise amathuba okubola.
Beka izimpande zakho ezi-turmeric emhlabathini bese umboza ngenhlabathi engu-1 intshi. Hlala umanzi, kepha ungabi manzi. Uma uqala i-turmeric endlini, sebenzisa ibhodwe elincane elingu-3-5 ”noma i-clamshell epulasitiki enomhlabathi wokubumba. Beka endaweni efudumele kufanele usheshise ukukhula kwamahlumela. Ungasebenzisa futhi umshini wokushisa izithombo. Akudingekile ukusebenzisa ukukhanya okukhulayo uze ubone amahlumela aluhlaza avela.
Lapho usuthole ama-intshi ama-intshi ama-3-5 ukuphakama, kufanele adluliselwe embizeni enkulu. Uma ugcina i-turmeric yakho ngaphakathi, uzodinga okuthile okungaba ngaphansi kokukhanya okukhulayo kanye / noma iwindi elikhanyayo. Qhubeka nokuhlinzeka ngomshini wokushisa ukuze ugcine ama-degree angama-70. Uma ukutshala ngaphandle kwama-rhizomes aqalisiwe kungabekwa ngaphandle kwamasentimitha ayisithupha kuya kwayi-4 kuya phezulu ngamasentimitha angu-2-4.
Ungethuki uma kuthatha isikhathi eside uze ubone amahlumela. I-Turmeric idinga izimo ezifudumele ukuze ivuke futhi ingahamba kancane ukuqala. Zigcine zimanzi futhi ube nesineke.
Ama-rhizomes ama-turmeric yiwona ingxenye esetshenziswa kakhulu kulesi sitshalo.
Zama ukuphindaphinda izimo zomdabu ezishisayo zesitshalo se-turmeric: ukufudumala ngenani lemvula elanele. Uma lezo zimo kuhlangatshezwana nazo uzothola impumelelo!
I-Turmeric ijabulisa kakhulu lapho inikezwa indawo engadini enelanga eligcwele, amazinga okushisa afudumele ngokulingene nendawo enomswakama. Ububanzi obufanele beTurmeric buphakathi kuka-68 no-86 ° F (20 no-30 ° C).
isibuyekezo sokomisa izinwele ezomile
Ngesikhathi sokushisa ngokweqile ngenhla kwama-90 °, kuzodinga umthunzi wantambama namanzi athe xaxa. Ezingxenyeni 8 nangaphezulu, lezi zimo zingatholakala ngaphandle konyaka wonke. Ezingxenyeni ezishisayo nezomile, isitshalo se-turmeric esifakwe esitsheni kufasitela eliboshwe ntambama elinama-misters singalingisa lezi zimo.
Ukukhula kwe-turmeric ezindaweni ezipholile kuzodinga ukuhamba ezindlini ukuhlinzeka ngalezi zimo ekuqaleni kwentwasahlobo nasekwindla. I-Turmeric ngeke imelane namazinga okushisa ashubisa umnkantsha futhi ama-rhizomes ngeke akhule ngenkuthalo angaphansi kwama-60 ° (15 ° C).
Lapho uqala ama-rhizomes ama-turmeric, nikeza amanzi amaningi kodwa ungabavumeli ukuthi babe manzi ngokweqile noma bazoqala ukubola. Umhlabathi kufanele uzizwe umanzi, kepha ungabi manzi. Indawo enomsele omuhle iyadingeka. Kusetshenziswa ipayipi lokudonsa ngokunensa noma i-soaker hose kungasiza ngokunisela ngokungaguquguquki, ikakhulukazi uma kuku- isikhathi sepayipi .
Lapho isitshalo se-turmeric sesihlumile, gcina isimo esifanayo simanzi, kodwa hhayi izimo. Kungaba kufudumele futhi ngokuhamba kwesikhathi ngenkathi, ngakho-ke amanzi amaningi azodingeka ukugcina lezi zimo. Lapho isivuno sisondela, yehlisa ukuchelela isonto elilodwa noma amabili. Ukudonsa ama-rhizomes enhlabathini eyomile kungenzeka ukuthi uwagcine engaphelele.
I-Turmeric ithanda umswakama, kepha ukuhlinzeka ngenhlabathi evulekile, ekhipha kahle kubalulekile. Umhlabathi wobumba kuzodinga ukuthi kusetshenzwe futhi kukhululwe ukuze izitshalo zikhule kalula ngaphansi komhlaba. Faka inani elanele lomquba osukhulile ukukhanyisa inhlabathi. I-Perlite ingathuthukisa ukugeleza kwenhlabathi enodaka ikakhulukazi, emanzi. Uma ukugcwalisa izimbiza, ukuxubana okuphekiwe kwekhwalithi kuzosebenza kahle.
Zonke izingxenye zesitshalo se-turmeric kufaka phakathi amaqabunga ziyadliwa.
I-Turmeric futhi iyisondli esindayo ngakho-ke sebenzisa inhlanganisela yenhlabathi ecebile ngezinto eziphilayo kanye nomquba wekhwalithi ukuqala. Lapho i-turmeric ikhula ngenkuthalo, yondla kuyo yonke inkathi njalo emavikini ambalwa. Ukusakazwa kwesibungu , umanyolo we-organic liquid, umanyolo we-granular organic, noma itiye lomquba yizinqumo ezinhle. Uma ubona isitsha sakho esikhulayo silahlekelwa yivolumu, phuma phezulu ngomquba omuhle wekhwalithi.
Ungabona amaqabunga angaphandle e-turmeric aqala ukushintsha abe nsundu. Uma lokhu kusekuqaleni kwesizini kungakhombisa ukuthi i-turmeric yakho ithola ilanga eliningi kakhulu futhi ingasebenzisa umthunzi. Sika amaqabunga ansundu ukuze unikeze amandla okukhula okusha.
Uma lokhu kwenzeka ngasekupheleni kwenkathi yokukhula cishe ezinyangeni eziyishumi zokukhula, cishe usuzovuna isikhathi! Shiya amaqabunga njengoba enjalo futhi unciphise amanzi ukulungiselela ukuvunwa.
Imvamisa, okuwukuphela kwendlela esebenzayo yokukhula kwe-turmeric ivela kuma-rhizomes. Ngokungafani nezinye izitshalo eziningi, ayikhiqizi imbewu ewusizo, esikhundleni sokuthuthuka ngokuyinhloko ngokunwetshwa kwezimpande.
Ngemuva kokuvuna, ungasebenzisi yonke i-turmeric yakho. Gcina okunye okuzotshalwa ngonyaka ozayo uma uthole ukuthi i-turmeric yakho ibe yizinhlobonhlobo ezikhule kahle futhi ikuthanda kakhulu. Gcina isitoko sokutshala endaweni epholile, emnyama kuze kufike isikhathi sokutshala.
I-turmeric eyomile ne-powder noma iqhwa ama-rhizomes wokugcina.
Impande entsha ye-turmeric ilungele ukuvunwa lapho ingena ekulaleni. Yilapho izimpande ze-turmeric zizoba zinkulu kakhulu futhi zivuthwe kakhulu ngokunambitheka kakhulu kwezidingo zakho zokudla zesikhathi esizayo. Isikhathi siyinkomba yakho enkulu. Kufanele okungenani kube yizinyanga eziyi-9 kuya kwezingu-10 selokhu kwahluma. Amaqabunga angaphandle kufanele futhi aqale ukushintsha abe nsundu ngokubomvu futhi aqale ukubuyela emuva.
Uma izimo zakho ezikhulayo zifana ncamashi nendawo yomdabu yase-tropical yase-tropical ungayibona iyimbali. Izimbali zibuthakathaka futhi zimhlophe, zinamathiphu ansomi noma abomvana. Imbali ayisona inkomba yokuthi isilungele ukuvunwa futhi imvamisa yenzeka ngasekupheleni kwentwasahlobo / ekuqaleni kwehlobo.
Ukusebenzisa izimbiza zokukhulisa kwenza isivuno sibe lula. Esikhundleni sokudonsela phezulu ezitshalweni, vula ibhodwe eceleni bese ulahla ngobumnene okuqukethwe okuhlunga ngesandla sakho ukukhipha ama-rhizomes enhlabathini. Ama-rhizomes ama-turmeric ajwayele ukukhula amaqhubu ohlangothini futhi afana nezandla noma izithupha. Bangakwazi ukuphuma kalula uma udonsa phezulu. Le ndlela yokuvuna futhi ayisebenzisi ithuluzi eliyingozi njengoba ukwazi ukugwaza noma ukulimaza ama-rhizomes. Imfoloko yokumba nayo ingasetshenziswa emibhedeni ephakanyisiwe noma emhlabathini ukuthola ama-rhizomes.
Ngemuva kokuvuna ama-rhizomes amasha angahlanjululwa ngobumnene ukuze kususwe ukungcola. Noma iziphi izimpande ezinde ezinentambo zinganqunywa kusetshenziswa shears ehlanzekile . Ukuhlangana phakathi kwesiqu ne-rhizome kulapho kuzohlukaniswa khona.
Uma uvuna amaqabunga noma izimbali, sika kuphela okudingayo. Lezi azigcini kahle, ngakho-ke kuzodingeka usebenzise lezo ezintsha ezivela engadini.
Gcina i-turmeric entsha esitsheni esiqinisa umoya efrijini. Kungakuhle ukuhlela ukukusebenzisa okusha kungakapheli amasonto ambalwa noma ulungiselele ukulondolozwa kwesikhathi eside njengezicucu ezingenamanzi, impuphu, noma iqhwa. I-Turmeric powder mhlawumbe iyindlela eguquguqukayo kakhulu futhi ejwayelekile kakhulu ye-culinarily.
Ukulungiselela i-turmeric powder, sika izimpande ze-turmeric zibe yizicucu ezincane bese qeda amanzi emzimbeni . Izingcezu kufanele zome ngokwanele ukuba zivele lapho ziphukile. Gaya endaweni yokucubungula ukudla, i-blender, noma i-spice grinder.
Amaqabunga abanzi aluhlaza okotshani futhi amile okweinyembezi, anamathisela ekugcineni kwesiqu.
Izinkinga eziningi ezivela ngesitshalo se-turmeric esikhulayo kungenzeka kungenxa yezimo ezingaphandle kwezinga lokushisa elilungile nobubanzi bomswakama. Amanzi amaningi, izimo ezomile ngokweqile, ilanga eliqondile emazingeni okushisa aphezulu, noma ezimweni ezibandayo kungaholela ekukhuleni okuncane nasezinkinga zezinambuzane.
Ukukhetha indawo efanele ukukhula ngoba isitshalo sakho sizogwema izinkinga eziningi. Kunconywa iziqukathi ezinamapayipi amahle.
Ukunisela ngokweqile noma amanzi ampofu kuzobangela izifo zefungal nokubola. Qinisekisa ukuthi amanzi adonsa kalula emhlabathini. Hlola inhlabathi ngamasentimitha ambalwa phansi. Kufanele kube manzi, kepha kungabi soggy. Lungisa uhlobo lwakho lokunisela ukuze ulondoloze izinga elifanele. Uma ukuchelela ngama-timers kukhumbula ngokukhethekile ukuthi unikeza amanzi kaningi ukuze uhlale umanzi, kepha kungabi isikhathi eside ukudala izimo ezi-soggy.
Ngesitsha ungaqala ngomhlabathi omuhle wokubumba omusha futhi ongeke ukwethule ukudubula ama-bore bore , ama-nematode ezimpande , ukuqhuma ama-nematode , futhi izilonda nematodes lokho kuzolimaza ama-rhizomes. Uma kukhuliswa imibhede esemhlabathini noma ephakanyisiwe kuyadingeka ukushintshanisa izitshalo ezikhuliswa isizini ngayinye ukugwema lezi zinambuzane.
Uma izitshalo zakho zibuthakathaka, ungazithola futhi kube lula ukuthola izinambuzane ezifana nazo izintwala noma izibungu zesicabucabu . Qinisekisa ukuthi izimo zokunisela zifanelekile futhi amaqabunga awomile kakhulu. Izinga lomsoco kufanele lanele futhi linikeze umanyolo ojwayelekile. Gxila emandleni akho ekulungiseni okubangela ukuthi izitshalo zakho ze-turmeric zibe buthakathaka. Susa ama-aphid noma izibungu zesicabucabu ngensipho yokubulala izinambuzane, uwoyela we-neem noma isifutho esinamandla sepayipi. Ngokuqubuka okukhulu, izifutho ze-pyrethrin zinomphumela omuhle ekwehliseni inani labantu.
I-Turmeric itholakala kalula ukubola kwezimpande kubangelwa yi-pythium. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ngenkathi inhlabathi ihlala inomswakama, ayihluphi. Ukwengezwa kwe-biofungicide microbial kungaba lusizo.
Isitshalo se-turmeric singaba buthakathaka njengoba sikhula amahlamvu.
Q: Izitshudeni ezingakhula ze-turmeric kusuka ku-esitolo kuthengiwe?
Impendulo: Impela! Ukukhulisa izimpande zakho ze-turmeric funa okuphilayo okungafanele kuphathwe futhi kuthinte ikhono lalo lokuhluma. Kuvame kakhulu ukuthola i-turmeric entsha kokudla okukhethekile kokudla kwase-Asia noma kwaseNdiya.
Q: Ingabe i-turmeric's i-a.S. unyaka nonyaka noma i-e-perennial?
A: ITurmeric ibhekwa njengokuhlala isikhathi eside. Ingavunwa ngomjikelezo waminyaka yonke lapho ibuyela emuva futhi iqala ukulala.
Q: Ingabe ama-turmeric amaqabunga asetshenziswayo?
IMPENDULO: Yebo! Eqinisweni, zonke izingxenye zesitshalo se-turmeric ziyadliwa. Amaqabunga anokunambitheka okuthe xaxa kepha anezici ezifanayo zezempilo.
ubra omuhle kakhulu ngemuva kokuncelisa
izinwele zokuvikela izinwele zemvelo ezimnyama
izitayela zokuvikela izinwele zemvelo